– मनिष के एस भट्टराई
नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्षले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदियो। बिकल्परहित अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक संसद बिघटन गरे र नेपाली राजनीति अहिले तातेको छ। प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष कम्मर कसेर संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै लागिपरेका छन भने ओली पक्ष कसरी हुन्छ चुनाव केन्द्रित भएर अघि बढ्दैछन्। एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपको शिलशिला जारी छ। जनादेशमा गएर जनताको भावनाको कदर गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हो भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्ष्यमा छन् भने उहीँ पार्टीका रामचन्द्र पौडेल संविधानको भावनाबिपरित जानु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आउनुभएको छ। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अन्योलता कायमै छ। यो मोडमा राजनीति गम्भिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राजावादीहरु सक्रिय भइराखेको बेलामा एकाएक संसद बिघटन हुनु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि के खोज्छस् कानो आँखोतुल्य भएको छ। पर्खाई अब केबल न्यायालयको छ। सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयले नै यसलाई वार वा पार गर्नेछ।
६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अवशान सँगसँगै धेरै उतारचढाव नेपाली राजनीतिमा आए। कहिले माओवादीको सरकार त कहिले नेपाली काँग्रेस। जनताको समस्याबाट भन्दा आफ्नै फाइदामा सबै रमाएपछि निराश जनताको ठूलो भरोशा नेकपामा थियो। तर सत्ता पाउनेबित्तिकै भ्रष्ट्रचार, अन्याय र बलत्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरेपछि अब जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको साबित भयो। जनता बिस्तारै पुरानै व्यवस्था नै ठिक रहेछ भन्नेमा पुगेका छन्। सक्रिय आन्दोलनमा हजारौंको संख्यामा उपस्थित जनमानसले फेरि राजतन्त्र नै चाहेका हुन कि जनता ? भन्ने पनि अनेकाैं प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
कोरोना महामारी अझै पनि नाजुक अवस्थामा छ। मृत्युको संख्या बढी नै राखेको छ। कोरोना माहामारीले देशको आर्थिक अवस्थालाई निकै गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। महिनौंको लकडाउनले अस्तब्यस्त व्यापार घाटा अझै पनि माथि उक्सिन सक्ने अवस्थामा छैन। विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा खोपको प्रयोग भएता पनि नेपाल अझै त्यसको तयारी अवस्थामा छैन। माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले केही महिनामै खोप उपलब्ध हुने बताए पनि नेपाल भित्रिन कति समय लाग्छ भन्न सकिन्न। परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको हालसालैको भारत भ्रमणमा दुई देशबिच सम्झौता पत्र भएकोमा केही आशावादी नेपालीहरु छन्। जटिलता कायमै छ। यसै महामारीको बिचमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले झन जटिलतामाथि नयाँ संकट थपिदिएको छ। सत्ताको लोभमा राजनीति कतिसम्म फोहोरी खेल हुन सक्छ। जनतामा निराशा र निस्कृयता प्रष्ट देख्न सकिन्छ। गन्तव्य अनिश्चित छ र यात्रा कठिन मोडमा छ।
कुनै पनि राज्यको सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ। सरकार कमजोर भयो वा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने राज्यले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नबाट बञ्चित रहन्छ। राज्यको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका र कार्यपालिका मजबुत रहे राष्ट्र सक्षम रहन्छ। जनताले आफ्नो मत दिएर राज्य सत्तामा पुर्‍याएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बिर्सेर गैरजिम्मेवार ढङ्गले राजनीतिक बाटो रोजेमा त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउने निश्चित छ। नेकपाको सरकारलाई जनताले दिएको बहुमत नेकपा सरकारको आन्तरिक द्वन्दका कारण तीन वर्षमै गर्नुपरेको संसद बिघटनले जनमानसको त्यो भारी अभिमतको अनादर भएको छ। जनताले विश्वास गरेर पाँच वर्षको म्यान्डेट सत्ताको लोभका कारण समय अवधि नपुग्दै देश नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी गरिएको प्रधानमन्त्रीको कदमले जनमानसमा एक किसिमको नैराश्यता पक्कै पनि छाएको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिएको नेकपा र ओली सरकार आजको परिस्थितिमा अन्त्यै मोडिएको छ।
कोरोना महामारीको चपेटामा देश परेको बेला राजनीतिक अन्योलता सिर्जित हुनुले फेरि एकपटक राज्य अस्थिरतातर्फ मोडिएको छ र जनता निराश छन्। बहुमत दिएर पठाएको सरकारबाट ठूलो आश राखेका नेपाली जनता फेरि ठूलो राजनीतिक भूमरीमा परेका छन्। अबको निकास कसरी हुन सक्छ ? जनता बाध्य छन्। कोरोना महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त भइराखेको बेला नेपाली राजनीतिमा देखापरेको अन्योलताले गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको छ। अब नेपाली राजनीति कता जाला ? सबैको मनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । निर्वाचनले निकास निस्कन्छ कि फेरि उहीँ अस्थिरता नै रहन्छ ? व्यवस्था परिवर्तनले के राजनीतिक र सामाजिक अन्योलताबाट नेपाली जनतालाई र समाजलाई पार लगाउन सक्ला ? यो सबै अब भविष्यले नै बताउला। तर समय आएको नेपाली जनताले अब जनादेशको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्छ र सक्षम व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाएर राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। अनि बन्न सक्छ हामीले सम्पूर्ण नेपालीले कल्पना गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। नेपाली सपना साकार पार्ने जिम्मेवारी अब नेपाली जनताकै हातमा छ। भगवानप्रतिको विश्वास र देशप्रतिको निष्ठाले निकास अवश्य दिनेछ। श्री पशुपतिनाथले सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको कल्याण गरून्।